Window အတက်မှာ Desktop.ini Notepad .. Auto ဖွင့်လာနေရင်ဖြင့် ~ မျိုးကို
Window အတက်မှာ Desktop.ini Notepad .. Auto ဖွင့်လာနေရင်ဖြင့်
08:55 Error, How To, Window7No comments
ဒီနေ့ စက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ ၀င်းဒိုး အတက်မှာ Desktop.ini Notepad ကြီးက Auto ဖွင့်လာတယ် ..။ ဘာကြောင့် ပွင့်လာလဲလို့ ရှာကြည့်လိုက်တော့ သူက ဒီလို ပြောတယ် ..။ Window7တွေမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တက်ပါတယ်တဲ့ ..။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်လိုဖြစ်တဲ့ သူတွေ ကို ပြန်ပြောပြဖို့ ကူးယူလိုက်ပါတယ်..။ ဖြစ်ရင်တော့ လုပ်လိုက်ပါ..။ အဆင်ပြေသွားစေရမယ်..။ ဘာသာပြန်ရမှာ ပျင်းလို့ ဒီတိုင်းကူးတင်ပါသည်..။
To fix the desktop.ini auto open on Windows7Build 7057 is pretty easy, just by removing and deleting the desktop.ini from the Startup folder, which Windows operating system loads on every boot up.
1.Open Windows Explorer, then click on Organize -> Folder and Search Options.
2.Go to View tab.
3.Under “Hidden files and folders” tree, select Show hidden files, folders and drives.
4.Uncheck Hide protected operating system files in order to be able to view the hidden desktop.ini file.
6.Navigate to C:\_ProgramData\_Microsoft\_Windows\_Start Menu\_Programs\_Startup folder, or alternatively, just type shell:common startup in Start Search and hit Enter.
7.Delete desktop.ini file inside the folder.
8.Navigate to C:\_Users\_USERNAME\_AppDa
ta\_Roaming\_Microsoft\_Windows\_Start Menu\_Programs\_Startup folder, or alternatively, just type shell:startup in Start Search and hit Enter.
9.Delete desktop.ini file inside the folder.
သူပြောတာက ရှုပ်နေအုံးမယ်..။ No 1 က Folder Option ကို ပြောတာပါ..။ Run ကနေပီး Control Folders ဆိုလည်း ရပါတယ်..။ သူပြောတဲ့ လမ်းကြောင်း အတိုင်း Run မှာ Copy ပီး Paste လိုက်ရင် လည်းရောက်ပါတယ်..။ မရရင် Search ကနေပဲ shell:startup လိုက်ရိုက်ရှာပါ..။ အဆင်ပြေကြပါစေ..။